९ बीमा कम्पनीले बोनस र हकप्रदबाट पुँजी पुर्याउन पाउलान् ? - Aarthiknews
९ बीमा कम्पनीले बोनस र हकप्रदबाट पुँजी पुर्याउन पाउलान् ?
काठमाडौं । चुक्ता पुँजी नपुगेका बीमा कम्पनीले बोनस र हकप्रद शेयर जारी गरेर पुँजी पुर्याउने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बीमा समितिले चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीलाई चुक्ता पुँजी नपुर्याउनुको कारणसहितको स्पष्टिकरण सोधेको थियो । बीमा समितिको उक्त स्पष्टिकरणको जवाफमा ती कम्पनीले उक्त जवाफ दिएका हुन् ।
गत असार मसान्तभित्र जीवन बीमा कम्पनीले चुक्ता पुँजी २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले १ अर्ब पुर्याउनुपर्ने बाध्यता नियामक निकाय बीमा समिति गरेको थियो । त्यो अवधिमा चुक्ता पुँजी नपुर्याएका चार जीवन बीमा कम्पनी र पाँच निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई कारबाही गर्ने तयारीमा बिमा समिति पुगेको हो ।
बीमा समितिले दिएको उक्त कारबाहीको धम्कीपछि बीमा कमपनीले चुक्ता पुँजी बोनस र हकप्रदबाट पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । चुक्ता पुँजी नपुर्याउने जीवन बीमा कम्पनीमा प्राइम लाइफ, सूर्या लाइफ, गुराँस लाइफ र राष्ट्रिय बीमा संस्थान छन् । त्यस्तै निर्जीवन बीमा कम्पनीतर्फ एनएलजी, युनाइटेड, प्रुडेन्सिययल, लुम्बिनी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी रहेका छन् ।
चुक्ता पुँजी नपुर्याएका बीमा कम्पनीले बोनस शेयरबाट चुक्ता पुर्याउने कोशिस गरेका छन् । तर, बोनस शेयरबाट पनि चुक्ता पुँजी नपुग्ने बीमा कम्पनीले हकप्रद शेयर वितरण गरेरै चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न बाध्य भएका हुन् । चुक्ता पुँजी नपुगेसम्म नगद लाभांश बाड्न नपाउने व्यवस्था यसअघि नै बीमा समितिले गरेको छ ।
बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई गत आर्थिक वर्षदेखि नयाँ तरिकाको नेपाल फाइनान्सियल रिर्पोटिङ स्टान्डर्ड (एनएफआरएस) अनुसारको वित्तीय विवरण तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसरी वित्तीय विवरण तयार गर्दा अधिकांश बीमा कम्पनीको नाफामा कमी आएका कारण बोनस शेयर वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
एनएफआरएस विगतको लेखा अभ्यासभन्दा अलि फरक छ । त्यसैले नयाँ लेखाप्रणालीमा केही कुरा बाझिएका छन् । पहिला वैशाखमा बीमा गरेर एक वर्षको प्रिमियम लिइन्थ्यो भने त्यो सबै प्रिमियम सोही आर्थिक वर्षको मानिन्थ्यो । तर, एनएफआरएस अनुसार, त्यसरी लिएको प्रिमियम अर्को वर्षको मानिन्छ ।
त्यस्तै एनएफआरएसले नाफाको ५० प्रतिशत रिजर्भमा राख्नुपर्दैन भन्छ । तर, बीमा सम्बन्धी कानुनले नाफाको ५० प्रतिशत रिजर्भमा राख्नु भन्छ । त्यस्तै बीमा समितिले भूकम्पपछि नाफाको १० प्रतिशत महाविपत्ति कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी सबै नियमको पालना गर्ने हो भने सबै कम्पनी घाटामा जाने बीमा व्यवसायीको भनाइ छ । यसमा केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने बीमा कम्पनीहरुको माग छ ।
५० प्रतिशत रिजर्भ राख्ने व्यवस्था त बीमा ऐनले नै गरेकोले त्यो संशोधन नभई बीमा समितिले पनि केही गर्न नसक्ने बीमा व्यवसायीहरु बताउँछन् । कम्तिमा महाविपत्ति कोषमा १० प्रतिशत रकम राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरिदिए पनि बीमा कम्पनीलाई केही सजिलो हुने उनीहरुको भनाइ छ । यो समस्या गत आर्थिक वर्षमा मात्र देखिने हो । चालू आर्थिक वर्षदेखि सबै मिल्ने व्यवसायीको तर्क छ । ५० प्रतिशत रिजर्भमा राख्दै एनएफआरएस अनुसार आर्थिक प्रतिवेदन बनाउने हो भने कम्पनीहरुको नाफा कम देखिन्छ।
पुरानो व्यवस्था अनुसार २० प्रतिशत बोनस दिने अवस्थामा रहेका कम्पनीहरुको समेत ब्यालेन्सिट नेगेटिभ देखिने व्यवसायीको भनाइ छ । अहिले नै शेयर बजार ओरालो लाग्नुको कारण पनि यही हो । त्यसमाथि वित्तीय विवरण नेगेटिभतिर आयो भने शेयर बजार झन् घट्छ । यसतर्फ पनि सोच्न संघले बीमा समितिलाई आग्रह गरेका छ । यति हुँदा हुँदै पनि अबको एक महिनाभित्र सबै बीमा कम्पनीको साधारणसभा हुने सम्भावना बढेको व्यवसायीको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी पुर्याउनुको विकल्प छैन ।
बीमा समितिले यसअघि नै गत पुस मसान्तभित्र चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यो अवधिमा चुक्ता पुँजी नपुर्याएका बीमा कम्पनीलाई पुनः असार मसान्तसम्म चुक्ता पुँजी पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । बोनस, हकप्रद वा मर्जरमा गएर भए पनि चुक्ता पुँजी पुर्याउन बीमा समितिले दबाब दिँदै आएको छ ।
मर्जरमा जान कुनै पनि बीमा कम्पनी तयार देखिएका छैनन् । त्यही भएकाले पनि हकप्रदको विकल्प नभएको बीमा बिज्ञको भनाइ छ । बीमा कम्पनीको शेयर लिएर बसेका सार्वसाधारणले पनि हकप्रद शेयर भर्नका लागि आफ्नो थैली कसिलो बनाउनुपर्ने देखिएको छ । अहिले अधिकांश बीमा कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ता वा सर्वसााधरण शेयरधनीहरु हकप्रद शेयर भर्नका लागि पैसाको जोहो गर्ने दौडधुपमा लगेका छन् ।